रोचक – TAJA PATRIKA
मेयरले आफ्नो कार्यकक्षमै मसाज गर्न लगाएपछि
जनकपुरधाम । धनुषाको बिदेह नगरपालिकाका मेयरको कार्यकक्षमै मसाज गराएको तस्वीर भाइरल भएको छ । मेयर बेचन दासले कार्यालयभित्रै सोफामा सहयोगीबाट मसाज गराउँदै गरेको तस्वीर भाइरल भएको हो । तस्वीरमा दास कार्यालयको सोफामा आराम गरिरहेको र कार्यालय सहयोगी करण दासले खुट्टामा मसाज गरिरहेको देखिन्छ ।
एजेन्सी, २७ पुस । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा बलत्कृत भएको १२ वर्षिया बलिकाले शिशुलाई जन्म दिएकी छिन् । जन्म दिएको केही बेर पश्चात शिशुको निधन भएको थियो । बालिकालाई पेटको दुखाई भएको क्रममा उनलाई जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । जाँच गर्ने क्रममा उनी ७ महिनाको गर्भवती भएको चिकित्सकले ठहर गरेकोे थियो । जाँचको केही बेर मै […]
अमेरिकामा २७ वर्ष पुरानो भ्रूणबाट जन्मिइन् बालिका
एजेन्सी, १८ मंसिर । अमेरिकामा २७ वर्ष पुरानो भ्रूणबाट बालिका जन्मिएकी छन् । मली गिब्सन नाम दिइएकी यी बालिका गत अक्टोबर महिनामा जन्मिएकी हुन् ।बालिकाको जन्मको प्रक्रिया २७ वर्षअघि सुरु भएको थियो। अक्टोबर १९९२ मा सुरक्षित राखिएको भ्रुणलाई सन् २०२० को फेब्रुअरीमा आएर बल्ल अमेरिकाको टेनसी निवासी टिना र बेन गिब्सनले उक्त भ्रूण अपनाएका थिए। […]
अनौठो गाउँ जहाँ पुरुष लाई प्रवेश दिईदैन
विश्वमा महिलालाई र पुरुषलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेकै छ । पुरुषप्रधान समाजबाट स्वतन्त्रता पाउनका लागि महिलाहरूले अनेका कोसिस गरिरहेकै छन् । तर, विश्वमा यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ आज पनि महिलाकै शासन चल्दै आएको छ । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो अफ्रिकी मुलुक केन्याको एक गाउँ । केन्याको नैरोबीस्थित एक गाउँ छ उमोजा । […]
काठमाडौं । मानिसको विभिन्न अंग् कहिलेकाही फर्फराउँछ । चिकित्सकले यसलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको रुपमा लिन्छन् । अंग फर्फराउनुलाई शुभअशुभको संकेतको रुपमा समेत लिइन्छ । हिन्दू शास्त्रमा विभिन्न अंग फर्फराउँदा हुने घटनाबारे लेखिएको छ । मानिसको शरीर अन्य प्राणीको तुलनामा निकै संवेदनशील हुन्छ । यही कारण भविष्यमा हुने घटनाप्रति हाम्रो शरीरले पहिले नै आशंका गरिरहेको हुन्छ […]
सामान्यतयाः महिलाले प्रयोग गर्ने कुनै पनि हैण्ड ब्यागको मुल्य कति पर्ला ? नेपाली बजारमा पाइने ब्यागमा औसत अधिकतम् मुल्य ८/१० हजार वा बढिमा २५ हजारसम्म पर्न सक्छ । तर के कुनै ब्यागको मुल्य २२ लाख ३२ हजारभन्दा बढि पर्ला ? अस्ट्रेलियामा एक महिलाले आफ्नो रोजाईको अत्यन्त महंगो ब्याग अर्डर गरिन् । उनले अर्डर गरेको ब्यागको […]
नवविवाहित जोडीलाई शौचालय बन्देज
हरेक समुदायमा अनेक परम्परा छन् विवाहका । यस्तै अनौठो प्रथा बोकेको समुदाय हो टिडोन्ग जहा“ भर्खर विवाह भएका नवदम्पतिलाई तीन दिनसम्मका लागि शौचालय बन्देज छ । हो, इन्डोनेसियाको यो समुदायको वैवाहिक परम्परा अनुसार यहा“ दुलाहा–दुलहीलाई विवाह भएको तीनदिनपछि मात्र शौचालय जान अनुमति हुन्छ । विवाहको तीनभित्र बेहुला अथवा बेहुलीले घरको शौचालय प्रयोग गरेमा भाग्य राम्रो […]
जब कुकुर आफ्नै चिहान खनेर निस्कियो
रुसमा मरेको भनेर गाडिएको एउटा कुकुर फिर्ता आएको छ । कुकुरका मालिकले आफ्नो कुकुर मरेको भनेर गाडिदिएका थिए । तर, उक्त कुकुर खाडल खनेर बाहिर निस्किएको थियो । खबरका अनुसार, १८ बर्षीय उक्त कुकुरको नाम डिक हो । जुन एकदमै गहिरो निद्रामा सुतेको थियो । डिकको मृत्यु भएको ठानेपछि उनका मालिकले कुकुरलाई गाडिदिएका थिए । […]
एकैसाथ सात बच्चालाई जन्म
हालै एकजना २५ बर्षीया इराकी महिलाले एकैदिन सात बच्चालाई जन्म दिएर चर्चित भएकी छिन् । यसमा ६ जना छोरी र एक जना छोरा छन् । पूर्वी इराकको दियाली प्रान्तको अस्पतालमा उनले बच्चाहरूलाई जन्म दिएकी हुन् । खबरका अनुसार सबै बच्चाहरूको स्वास्थ्य सामान्य छ । २५ बर्षीया आमा पनि स्वस्थ रहेको अस्पतालले जनाएको छ । बच्चाका […]
सडकमा डलर बर्सिंएपछि…
सन् २०१८ को अन्त्यसँगै अमेरिकाको न्यूजर्सीमा एउटा रमाइलो घटना घटेको छ । इस्ट रुथरफोर्ड राजमार्गमा पैसाको नोट जताततै उडेको देख्न पाइन्थ्यो । यी नोट समात्नका लागि मानिसहरूको भागदौड चलिरहेको हुन्थ्यो । ब्यस्त सडकमा दुर्घटना भएपछि यस्तो दृष्य देख्न पाइएको हो । खबरका अनुसार, ब्रिक कम्पनी ट्रक दुर्घटनामा परेपछि त्यसमा रहेको ५ लाख डलर रकम सडकमा […]